Dots - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
တနင်္လာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 29, 2021
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ Dots
Although the indicator calculation is not based on standard MetaTrader platform indicators, it uses the iMA (ပျမ်းမျှ Moving) function to get prices ofaspecified type (Open, ပိတ်, Maximum, Minimum, Typical etc.). The calculation is based on cosine ofaprice change angle. The user can set several input parameters.
Length (က default = အားဖြင့် 10) — indicator period. The higher this value, the higher the time lag, and the fewer false signals are displayed.
Filter (က default = အားဖြင့် 0) — useful parameter allowing to filter price surges without adding display lags.
တိမ်းယိမ်းခြင်း (က default = အားဖြင့် 0) — vertical indicator shift.
အဆိုင်း (က default = အားဖြင့် 0) — horizontal indicator shift.
Dots isaMetatrader4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
Copy Dots.mq4 to your Metatrader Directory / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
How to remove Dots.mq4 from your Metatrader4ဇယား?
နိုဝင်ဘာ 29, 2021
multi TIMEFRAME Bollinger တေးဂီတအဖွဲ့များ – MetaTrader ဘို့ညွှန်ပြချက် 4
နိုဝင်ဘာ 28, 2021